बाढीका कारण सुत्केरी र गर्भवती समस्यामा – इन्सेक
बाढीका कारण सुत्केरी र गर्भवती समस्यामा
०७६ साउन ५ गते
गत असार २६ गते खोला गाउँ पसेपछि चार महिनाको दूधे बालक च्यापेर घरबाट निस्किएकी बेलका नगरपालिका–१ पलारकी रोजी नेवार यतिबेला सुखनी आधारभूत विद्यालय सप्तरीमा आश्रय लिएर बस्दै आएकी छिन् ।
आधा किलोमिटर टाढा रहेको त्रियुगा खोला गाउँ पसेपछि उनलाई स्थानीयले उद्दार गरी घरबाट निकालेका थिए ।
‘१० मिनेट मात्र ढिला भएको भए भेलले सपरिवार डुबिने रहेछ ।’–उनले भनिन्–‘बाँच्ने दिन रहेछ र छिमेकीले उद्दार गरिदिए ।’
दूधे बालक च्यापेर मलिन अनुहारमा घटनाक्रम सुनाउँदै उनले भनिन्–‘सोच्दै नसोचेको भयो । घर पुरै लग्यो अब कहाँ बस्नु ?, के खानु ?, नानीको स्यहारसुसार कसरी गर्नु ? आफ्नो ज्यान कसरी सुरक्षित गर्ने भन्ने मात्र चिन्ता भयो, अन्नपात, लत्ताककपडा झिक्न पाइएन । लगाएको धान खेती बगरमा परिणत भयो । बाँकी दिन कसरी बिताउने होला ?’
आफूभन्दा पनि दूधे बालकको चिन्ता लागेको उनको भनाई छ । ‘स्कुलको बसाई छ । न शुद्घ पिउने पानी छ । न राम्रो शौचालय नै ! न खाने कुरा नै राम्रो खान पाइन्छ । कसरी बच्चालाई जोगाउनु ?’–उनले भनिन् ।
‘एकातर्फ बालबच्चा कसरी हुर्काउने भन्ने चिन्ता छ । अर्कोतर्फ प्रकोप र सर्पबाट कसरी जोगिने भन्ने चिन्ता छ ।’–उनले भनिन्–‘त्यसैपनि गर्मी ठाउँ सर्पको बिगबिगी झन् खोलाले बगाएर ल्याएका सर्प छ्यापछ्याप्ती भेटिन्छन् ।
त्यसो त रोजीको मात्र यो समस्या हैन । बेलका नगरपालिका–१ र २ का ६० जना भन्दा बढी सुत्केरी तथा गर्भवती महिलाको समस्या उस्तै छ । भएको अन्नपात त्रियुगा खोलाले डुबाएपछि स्थानीय विद्यालय र आफन्तकोमा आश्रय लिएर बस्न बाध्य छन् ।
५ महिनाको छोरी लिएर रमा अधिकारी, ३ महिनाका छोरो च्यापेर सीता श्रेष्ठ, एक वर्षीय छोरी बोकेर शोभा अधिकारी, तुलसी श्रेष्ठ लगायतका सुत्केरी महिला सोही विद्यालयको कोठामा बस्छन् ।
उनीहरुलाई तत्काल उद्दार गरी सार्वजानिक संरचनामा स्थान्तरण गरिएको बेलका नपाका मेयर दुर्गाकुमार थापाले बताए ।
उनले विभिन्न निकायको सहयोगमा केही राहत वितरण गरिएको बताए । अन्य सर्वसाधरण भन्दा पनि यो समयमा सुत्केरी महिला थप पीडामा हुने भएकाले संरक्षणका लागि स्थानीय जनप्रतिनिधि, केन्द्र, प्रदेशसँग कुरा भइरहेको अनुगमनमा पुगेका जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख खड्गबहादुर परियारले बताए ।
उनले भने–‘सुत्केरी अवस्था आफैँमा सम्वेदनशील समय हो । त्यसमा साना नानीबाबु हुँदा समस्या अझ गम्भीर छ ।’
उनले प्राकृतिक प्रकोपले पारेको समस्या समाधानका लागि स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारसँग समन्वय गरी सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।